सावधान ! अब घर बाहिर बढि ननिस्कनुहोस: वायु प्रदूषणका कारण आँखाका बि रामीको संख्या ह्वा त्तै बढ्यो – Ap Nepal
सावधान ! अब घर बाहिर बढि ननिस्कनुहोस: वायु प्रदूषणका कारण आँखाका बि रामीको संख्या ह्वा त्तै बढ्यो
दुई हप्तादेखि मकवा’नपुरको हेटौँडा आसपास क्षेत्रमा लागेको डढेलो र वायु प्रदूषणका कारणले जिल्लामा आँखाका बि’रामीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । वायु प्रदूषणको जोखिम बढेपछि हेटाँैडाको सामु’दायिक आँखा अस्पतालमा आँ’खाको उपचार गराउनेको सङ्ख्यामा व्यापकरुपमा वृद्धि भएको सो अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । विगत दुई हप्तादेखि वायु प्रदू’षणका कारणले आँखा उपचार गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासक सुधीर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अहिले वायु प्रदूषण’लगायत र अन्य विभिन्न कारणले दैनिक ३५० भन्दा बढी आँखाका बिरामी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने गरेको बताइएको छ । अस्प’तालमा आँखाको उपचार गराउन आउने अधिकांश बिरामीको आँखा पोल्ने, आँखा रातो हुने र आँखामा एलर्जी हुनेलगायत टाउको दुख्ने समस्या रहेको बताइएको छ । अस्पता’लमा नियमित आँखा जाँच गराउन आउने र फलोअपका लागि आउने तथा आँखाको शल्यक्रिया गराउन आउनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेकाले सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप बढेको प्रशासक श्रे’ष्ठले बताउनुयो ।
अस्पता’लमा हप्तामा पाँच दिन आँखाको शल्यक्रिया हुने गरेको छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महा’मारीका कारण दैनिक २०० आँखाका बिरामीको उपचार गर्दै आएको सो अस्पतालले बिरामीको चाप बढेपछि बिहान ७ बजे’देखि ११ बजेसम्म तोक्न दिने गरेको र त्यही समयदेखि उपचार शुरु हुने गरेको बताइएको छ ।
आँखाको सामान्य जाँ’चपश्चात् १५० भन्दा बढीले चश्मा बनाएर जाने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । आँखा अस्पतालमा आउने सम्पूर्ण सेवाग्राहीमध्ये ५० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमाका सदस्य रहेको बताइएको छ । बीमाबाट चश्मा बनाउन एक आर्थिक वर्षमा एकप’टकका लागि रु एक हजार उप’लब्ध हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी आँखाको निजी क्लि’निकमा उपचार गराउने तथा चश्मा पसलमा पनि चश्मा बनाउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताइएको छ । वायु प्रदूषण र धुवाँ’धुला कारण हेटौँडा अस्पतालमा रुघाखोकी र नाक, कान र घाँटी तथा एलर्जीका बिरामीको उप’चार गराउनेको सङ्ख्या बढेको सो अस्पतालले जनाएको छ । निजी क्लिनिक र नर्सिङ होममा पनि वायु प्रदूषणबाट प्रभा’वित बिरामी उपचार गराउने बढेको पाइएको छ । ओएस नेपालबाट
Prevसुन्दरताको कारण भाई रल बनिन् कान्तिपुर टिभीकी समाचार वाचिका श्री पाण्डे (फोटो फिचर)
Nextभोली सोमबारे औंसीको रात,गर्नुहोस चुप-चाप यो एउटा कार्य लाभ मिल्छ।